Usengu mbhishobhi uDube wodumo | News24
Usengu mbhishobhi uDube wodumo
ISITHOMBE:sithunyelwe UBishop Vusi Dube nonkosikazi wakhe uDkt Taki Dube emva kokuba egcotshwe njengoMbhishobhi ngeSonto.
UMFUNDISI wodumo lwe-Ethekwini and Umgungundlovu Community Churches (ECC) uVusi Dube usethembise ukusebenza ngokuzikhandla ekulwisaneni noqhekeko phakathi kwabamnyama nabamhlophe.
UDube ukusho lokhu emva kokuba egcotshwe ngokusemthethweni njengombhishophi waleli bandla ngeSonto esephuma kulona. Wasungula leli bandla eminyakeni eyi-15 edlule lagcina selikhulile kulesi fundazwe, njengoba selinamagatsha ayi-15 angaphansi kwalo.
Ekhuluma nephephandaba i-Echo uthe: “Kumina ukugcotshwa njengombhishobhi akuyona into engiyithatha njengesikhundla, kodwa ngikuthatha njengomsebenzi omningi engiwunikwa uNkulunkulu ukuze nginakekele isizwe.
“Alukho ushintsho olungako njengoba ngizoqhubeka ngibe umfundisi waleli bandla. Kuphela nje umsebenzi usuzoba ngaphezu kwalowo ebengiwenza, njengoba sekuzofanele ngikhulise abefundisi abangaphansi kwami.
“Angizukunanekekela ibandla kuphela, kodwa sekuzofanele ngibheke izingqinamba ezibhekene namanye amabandla nesizwe. Sengizoba negunya lokukhuza nezinto engingaziboni kahle ezweni, njengokuhlukunyezwa kwalabo bokufika. Ngizophinde ngilekelele kakhulu ekukhuliseni lawo mabandla asafufusa.”
UDube uqhube ngokuthi ohlweni lwezinto ezisemqoka azozenza ukulwa nokubuyiswa kwezimilo nobuntu, nokubuyisana kwabamhlophe nabamnyama.
“Ngiyakholelwa ukuthi akukabi khona ukubuyisana kahle phakathi kwalezi zizwe. Kuyafuneka ukuba kube nohlelo lokuthi iziphi izindlela ezingasetshenziswa ukushumayela ivangeli lokuthula phakathi kwalezi nhlanga.
“Okunye futhi ngizongenelela ukuze kube nokukhula kwezepolitiki (political maturity). Izwe lifile nje ingoba abantu abakhulile ngezepolitiki. Kufuneka bafundiswe ukuze kunqobeke ukubhebhetheka kodlame.”
Ebuzwa ngaleli zinga asekulona uthe: “Ngaphezu kwakho konke, kuyangithobisa ukuthi abantu bayawabona amagalelo ami. UNkulunkulu uma ekunika umsebenzi ongaphezu kwalo obuwenza, nawe kuyakuthobisa kudingeka ukuba wehle kakhulu, ukuze uhlale njalo.”